U-Lisa Jackson Unika uJohn Gruber Udliwanondlebe woMhla woMhlaba | Ndisuka mac
U-Lisa Jackson unika uJohn Gruber Udliwanondlebe loMhla woMhlaba
KuMgqibelo odlulileyo Usuku Lomhlaba. Ukuthatha umzuzu, intatheli UJohn gruber Udliwanondlebe noLisa Jackson kwiPodcast yakhe eyaziwayo. Kumdlalo wabo "weeNtetho" bathethe ngemicimbi eyahlukeneyo yokusingqongileyo: iziphumo zehlabathi zotshintsho lwemozulu kwaye ngokukodwa malunga neenzame zika-Apple zokugcina okusingqongileyo. Kude kube ngoku, iinzame zenkampani zijolise ekuvelisweni kwamandla eluhlaza. Ngemihla yokugqibela, kugxilwe kwiinkqubo zokugcinwa kwemigodi apho bakhupha khona izinto zokucacisa izixhobo zabo.
La manani alinganiswa kumgangatho wekhabhoni oshiywe ngumvelisi. UJackson wenze igalelo lokuba i-Apple's carbon footprint ngo-2016 yayizi-29,5 yezigidi zeetoni, ukuba sibala imigodi, ukuhanjiswa kwemveliso, kunye nokupakisha kunye nombane oyimfuneko ekwenzeni imveliso.
Ngokuka-Lisa Jackson, isicwangciso sika-Apple sokunciphisa eli xabiso asisiyodwa. Umenzi ngamnye unendlela yokuvelisa kwaye ke kufuneka afunde isicwangciso esithile nomnikezeli ngamnye wabanikezeli. Isicwangciso segeneric asizukusebenza nge-100%. Ababoneleli abathathu abatsha bajoyine isicwangciso se-100% samandla acocekileyo kunyaka ophelileyo. Ngoku isebenza nabanikezeli abasi-7 ukuguqula iipesenti ezili-100 zeenkqubo zayo zemveliso ngamandla aluhlaza.
Kwiveki ephelileyo, iApple ibhiyozele uSuku loMhlaba ngeziganeko ezahlukeneyo: ukunikela ngenxalenye yengeniso kwindalo esingayisebenzisanga imibutho engenzi nzuzo. Ikwaqhuba umsebenzi wokwazisa abathengi bayo ukuze bakwazi ukuzilolonga phesheya kwaye baya kuvuzwa ngemiyalezo ekhethekileyo kwisicelo seMessage.
Ukuthatha ixesha, kule veki utyhile eyakhe Ingxelo yoXanduva lokusiNgqongileyo ka-2017. Amandla abe lukhathalelo lweemigodi kunye nolwakhiwo lwezixhobo ngezixhobo ezihlaziyiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » U-Lisa Jackson unika uJohn Gruber Udliwanondlebe loMhla woMhlaba
UTim Dashwood kunye neeplagi zakhe bajoyina iApple
Imfazwe iyonke: WARHAMMER ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye-Mac App